ပန်းရောင် Crazy ဆိုတာ သက်သေပြနေတဲ့ Rosé ရဲ့ ပုံလှလှလေးတွေ | News Bar Myanmar
ပန်းရောင် Crazy ဆိုတာ သက်သေပြနေတဲ့ Rosé ရဲ့ ပုံလှလှလေးတွေ
BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Rosé ဟာ ပန်းရောင် အရမ်းကြိုက်တယ်ဆိုတာ blink စစ်စစ်ဆိုရင် သိကြပါတယ်။ Pink color ဆိုတာ ချစ်ဖို့ကောင်း၊ နူးညံ့သိမ့်မွေ့ပြီး ကျော့ရှင်းလှပတာကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ Pink နဲ့ Rosé ဆိုတာ ခွဲမရအောင် Rosé က ပန်းရောင် အသုံးအဆောင်တွေ အရမ်းသုံးတတ်တဲ့သူပါ။ Rosé ဟာ ပန်းရောင် Crazy တစ်ယောက်ဆိုတာ သက်သေပြနိုင်မဲ့ ပုံလေးတွေကို ခုလိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1.Baby Pink ကို ပိုကြိုက်တဲ့ Rosé
Rosé ဟာ ပန်းရောင်ကြိုက်ပေမဲ့ baby pink ကို ပိုကြိုက်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။“BLACKPINK House” variety show ရဲ့ 1st episodes မှာ ပန်းရောင်တွေနဲ့ထုံခြယ် ထားတဲ့ သူမအခန်းကိုပြခဲ့သလို hair brush ကို ရွေးနေတဲ့အချိန်မှာ Baby pink က အလှဆုံးဆိုတာ Rosé က ခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
“ဒီပန်းရောင်!! ဒါကအရေးအကြီးဆုံးဘဲ။ ဒီပန်းရောင် Baby pink က လေ ပန်းရောင်တွေထဲမှာ အလှဆုံးဘဲ။ hot pink မဟုတ်ဖူးနော်။ Baby pink ကိုပြောတာ။ ဒီပန်းရောင်နုနုလေးဟာ အလှဆုံးပါ”
2. BLACKPINK debut MV မှာထဲက ပန်းရောင် ဘယ်လောက်ကြိုက်ခဲ့သလည်းဆိုတာ ပြခဲ့တဲ့ Rosé
BLACKPINK ရဲ့ ပထမဆုံး debut MV “Whistle” MV ထဲမှာ အဖွဲ့ဝင်တွေ အကုန်လုံးဟာ black နဲ့ pink color ဝတ်စားထားတာ တွေ့ရမှာပါ။ Rosé ကတော့ ပန်းရောင် ဝတ်စုံလေးကို ဝတ်ဆင်ထားသလို ပန်းနုရောင် နှုတ်ခမ်းနီပါဆိုးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆံပင်ကိုပါ ပန်းရောင် အနုအရင့် highlight ဖောက်ထားပါသေးတယ်။
3. “As If It’s Your Last” era မှာလည်း ပန်းရောင်တွေသာ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ Rosé
ထို Era မှာ Rosé ဟာ အမျိုးမျိုးသော ပန်းရောင်တွေကို ချစ်ဖို့ကောင်းအောင် ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ပန်းရောင်တောက်တောက် တောင်မှ ဝတ်ပြခဲ့ပါတယ်။
4.ထသွားထလာ အဝတ်အစားတောင် ပန်းရောင်ဘဲ ဝတ်ဆင်တဲ့ Rosé
Rosé ဟာ Stage ပေါ်မှာ ဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာ လှပရှုပ်ထွေးတဲ့ Designer ထုတ် ပန်းရောင် outfit လေးတွေ ဝတ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ offstage မို့လို့ ပေါ့​ပေါ့ပါးပါးဝတ်လို့ရတဲ့အခါလည်း ပန်းရောင်ဘဲ ရွေးချယ်တတ်သူပါ။ မင်မင်တော့ သူ့ ဘီဒိုထဲမှာ ပန်းရောင်စကဒ်တွေ ဘယ်နှစ်ထည်လောက်ရှိနေမလည်း စဉ်းစားနေမိပါတယ်။
5.ပန်းရောင်တောက်တောက် ဆံပင်နဲ့ love sick girl Rosé လေး
ဆံပင်ကာလာ အငြိမ်လေးတွေဘဲ ဆိုးတတ်တဲ့ Rosé ဟာ “Love sick girl” သီချင်းမှာတော့ ပန်းရောင်တောက်တောက်လေး ဆိုးထားပြီး အမိုက်စားကောင်မလေးပုံစံ ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
6. ပန်းရောင်နဲ့ တကယ်လိုက်ဖက်တဲ့ Rosé
အသားဖြူသူမို့ ဘယ်အရောင်နဲ့မဆို လိုက်ဖက်တဲ့ Rosé ဟာ ပန်းရောင်နဲ့ဆို ပိုချစ်ဖို့ကောင်းပြီး ကြည့်ကောင်းနေတယ်ဆိုတာ ငြင်းမရတဲ့အချက်ပါ။ Tour လုပ်တုန်းက ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ဒီ outfit လေးတွေဆို Rosé နဲ့ တော်တော်လိုက်ဖက်ပါပေတယ်။
7. Rosé ရဲ့ signature Pink Blonde hair
ရွှေအိုရောင် hair color ဟာ Rosé ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အမှတ်သားပါ။ ထို color မျိုးတွေ အမြဲဆိုးတတ်တဲ့ Rosé ဟာ သူမအကြိုက်ဆုံးက Pink Blonde hair ပါလို့ ELLE Korea ရဲ့ interview တခုမှာ ဖြေဖူးပါတယ်။
အနီရောင်နဲ့ ပန်းရောင်အတွဲအစပ်ဟာ ထူးဆန်းပေမဲ့ အရောင်တွေထဲမှာ အလှဆုံး combo ပါဘဲ။ DDU-DU DDU-DU” Era မှာ Rosé ဟာ ဆံပင်ကို အနီရောင်ဆိုးခဲ့ပါတယ်။ Ariel မင်းသမီးလေးလို လှနေတဲ့ Rosé ဟာ သူမအကြိုက်ဆုံး ပန်းရောင် ဝတ်စုံတွေ ဝတ်ဆင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ လုံးဝ Perfect ဖြစ်သွားပါတယ်။
9. ညအိပ်ဝတ်စုံပန်းရောင်လေးနဲ့ cute နေတဲ့ Rosé
ညအိပ်ဝတ်စုံတောင်မှ ပန်းရောင်ဝတ်တတ်တဲ့ Rosé လေးပါ။ မိတ်ကပ်မပါတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့မို့ ကလေးလေးကျနေတာဘဲနော်။
10.အိမ်စီးဖိနပ်တောင် ပန်းရောင်ဘဲဝတ်တဲ့ Rosé
စိတ်ထားကောင်းတဲ့ကောင်မလေးမို့ သူမ ရွေးချယ်တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကအစ နုနုဖတ်ဖတ်လေးတွေပါဘဲ။ အမွှေးပွပွ ပန်းရောင် ယုန်ရုပ် ဖိနပ်လေးကိုဝတ်ပြီး ထိုင်နေတဲ့ပုံစံလေးက တကယ်ကို ကောက်ပွေ့ချီချင်စရာလေးပါ။
BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးမှာ ကိုယ်ပိုင် ပန်းနုရောင် မိုက်တလုံးစီ ရှိကြပါတယ်။ ဒီလိုပုံစံ မိုက် ရွေးချယ်တာ Rosé ရဲ့ idea ဘဲ လားမသိပါဖူး။ ဘယ်သူ့ idea ဖြစ်ဖြစ် Rosé ရဲ့ pink stage outfit တွေနဲ့ match ဖြစ်နေတာတော့ အမှန်ပါဘဲ။
12. Rosé ရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ပန်းရောင်လက်ဖောင်းအင်္ကျီတွေ
မိန်းကလေးတွေ လက်ဖောင်းပွပွအင်္ကျီ ဝတ်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်စွန့်စားရဲမှ ရမှာပါ။ Rosé ဝတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Rosé နဲ့လိုက်ဖက်နေတာကို ခုလို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
13.ခေါင်းအစခြေအဆုံး ပန်းရောင်သာ သုံးခဲ့တဲ့ Rosé
ခေါင်းအစခြေအဆုံး ပန်းရောင်ဝတ်ထားတဲ့ Rosé ရဲ့ ခုပုံလေးက သူ့အိမ်မှာ တော်တော်သက်တောင့်သက်သာ ရှိနေပုံပါဘဲ။
14.Solo MV မှာတောင် ပန်းရောင်တွေဘဲ သုံးခဲ့တဲ့ Rosé
Rosé ကတော့ သူမဘဝရဲ့ ပထမဆုံး solo MV မှာပါ ပန်းရောင် မဝတ်ရရင် ကျော်မသွားနိုင်ဖူး ထင်ပါတယ်။ MV ထဲမှာ ပန်းဆီရောင်ဝတ်စုံနဲ့ အမိုက်စား လန်းနေသလို သူမအကြိုက်ဆုံး baby pink color ဝတ်စုံလေးနဲ့လည်း အလှကြီးလှနေတာကို တွေ့ရမှာပါ။
ဒါတွေကတော့ ပန်းရောင်ကြိုက်လွန်းသူ Rosé လေးရဲ့ moment လေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းရောင်ကို မိန်းကလေးတိုင်းကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ Rosé ရဲ့ ပန်းရောင်ကြိုက်တတ်ပုံကတော့ စံတင်လောက်ပါပေတယ်။
Next June လအတွက် ကျော်ကြားမှုအဆင့်အလိုက် Top 30 ဝင်နေတဲ့ ယောက်ျားလေးအဖွဲ့ ၃၀ »
Previous « ကမ္ဘာအထိ နာမည်ကျော်ကြားအောင်မြင်နေတဲ့ ထိုင်းမင်းသမီး ၁၄ ဦး